Denmark airport welcomes opening of Norwegian Air base | Airlines
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Airlines » Gegada dayuuradaha ee Danmark waxay soo dhaweysay furitaanka saldhigga hawada ee Norway
Gegada dayuuradaha ee Danmark waxay soo dhaweysay furitaanka saldhigga hawada ee Norway
Gegida diyaaradaha ee Billund ee Denmark ayaa xaqiijisay in diyaarada Norwegian Air Shuttle ASA oo jaban, oo caadi ahaan iyo si fudud loo yaqaan Norway, ayaa saldhig cusub ka furtay garoonka diyaaradaha shalay oo ay taariikhdu ahayd 1/2019/XNUMX.
Saldhigyada cusub ayaa leh 186-kursi 737-800. Ballanqaadkan gegida dayuuradaha, Norway waxay furi doontaa 8 goobood oo cusub. Afar ka mid ah dariiqyada uu qaadigu bilaabayo, kuwaas oo kala ah Malaga (oo la bilaabay Abriil 1), Palma de Mallorca (oo bilaabmaya May 6), Ponta Delgada (May 7) iyo Faro (May 11) ayaa loo duulin doonaa sidii adeegyada loo qorsheeyay, halka kuwa soo socda 4. Meelaha loo aado Chania (May 5), Zante (May 6), Rhodes (May 10) iyo Kos (May 16) ayaa loo duulin doonaa iyagoo ka wakiil ah Bravo Tours oo ku yaal Danmark.
Hawlgalka cusub ee Norway wuxuu ku dari doonaa 14 bixitaan dheeri ah oo toddobaadle ah wuxuuna ku biirin doonaa in ka badan 5,200 kuraasta labada dhinac ah ee suuqa Billund xagaagan.
Duulimaadyada la qorsheeyay ee Malaga waxay shaqayn doonaan laba jeer-isbuucii Isniinta iyo Jimcaha, ka hor inta aysan u korin afar jeer adeegga toddobaadlaha ah laga bilaabo 6-da Maajo markaasoo Arbacada iyo Axadda wareegyada lagu dari doono. Adeegyada Palma de Mallorca waxay shaqayn doonaan maalmaha Isniinta iyo Jimcaha, halka Faro uu arkayo bixitaan Sabti ah iyo Ponta Delgada oo la duulinayo Talaadada. Ka shaqaynta Bravo Tours, Chania waxay arki doontaa saddex duullimaad toddobaadle ah Khamiista, Jimcaha iyo Axadaha, iyadoo siinaya macaamiisha ikhtiyaarrada 7, 10, 11 iyo 14-habeen nasashada ee Crete, halka Zante (Isniin), Kos (Khamiis) iyo Rhodes (Jimcaha) Dhammaantood waxay arki doonaan adeeg toddobaadle ah.
Norwegian, oo qaaday 36.97 milyan oo rakaab ah 12-bilood ee ku ekaa November 30, 2018, ayaa ka shaqaynaysay Billund Ilaa 2010. Hadda oo u adeegaya gegida dayuuradaha ee Oslo Gardermoen sanad walba, qaaduhu waxa kale oo uu ka shaqeeyaa adeegyada xagaaga-xilliga Alicante iyo Barcelona. Waxay la macno tahay in 2019 Norwegian ay u duuli doonto 7 goobood oo qorshaysan oo ka yimid Billund, iyo sidoo kale 4ta goobood ee loo tago iyagoo matalaya Bravo Tours.
Airport Denmark Mallorca Shuttle-ka Hawada Norway Oslo
Thailand: 1,000 Spire Pagoda
Pope Francis wuxuu magacaabayaa prelate-ka Tansaaniya si uu u matalo Vatican-ka New Zealand
Xaaladda Degdegga ah ee Sri Lanka ayaa looga dhawaaqay mid ka dhan ah...
Dulmarka Suuqa Cabitaanka Ciyaaraha ee Aan GMO La Xaqiijin &...